Chishanu, December 3, 2021 China, December 2, 2021 Sesie Bonsi
Anenge munhu wese anotya kudhawunirodha imwezve app pavanenge vachigara pasi kuti vadye muresitorendi. Sezvo Covid-19 yaifambisa kudiwa kwekusabatika kuodha uye kubhadhara, kuneta kweapp kwakava chiratidzo chechipiri. Tekinoroji yeBluetooth yakaiswa kuti igadzirise mafambisirwo emari aya nekubvumira kubhadhara kusingabatike pamatanho akareba, tichishandisa mapurogiramu aripo kuti adaro. Ongororo ichangoburwa yakatsanangura kuti denda rakawedzera sei kutorwa kwemadhijitari ekubhadhara matekinoroji. 4 kubva ku10 vatengi veUS vane
China, December 24, 2020 China, December 24, 2020 Tanya Singh
Iyo yepasirese yemari yekubhadhara pamusika saizi inotarisirwa kubva kuUS $ 79.3 bhiriyoni mu2020 kusvika kuUS $ 154.1 bhiriyoni na2025, kuCompound Annual Growth Rate (CAGR) ye14.2%. MarketsandMarkets Mukutarisa kumashure, hatina chikonzero chekusahadzika iyi nhamba. Kana paine chero chinhu, kana tikachengeta yazvino coronavirus dambudziko mukutarisa, kukura nekutora kunowedzera. Utachiona kana hutachiona hutachiona, kukwira kwemubhadharo wekusabatana kwaive kwatove pano. Sezvo zvikwama zve smartphone zvinonyepa